KIANJA VAVATENINA : Manomboka ny asa fanamboarana kianja filalaovam-baolina
An-taonany maro no nisahirana tamin’ny fampiasana kianja filalaovam-baolina ny mponina tao Vavatenina tampon-tanàna. 13 novembre 2017
Ny antony, dia nisy ny fifanolanana momba ny tany tamin’io kianja monisipaly hany tokana misy ao an-toerana. Fifanolanana izay tonga hatrany amin’ny fitsarana. Niravona tanteraka ny disadisa amin’izao fotoana izao. Izany no tanteraka dia vokatry ny fifampiresahana nisy teo amin’ireo solontenam-panjakana sy ny mpandova ny tany.
Niverina amin’ny vahoaka araka izany ny kianja filalaovam-baolina.
Tsy hoe niverina fotsiny fa hatsaraina. Ny zoma 10 novambra lasa teo no tonga tao Vavatenina ny iraky ny minisiteran’ny fanatanjahantena notarihin’ny lehiben’ny Faritra Analanjirofo sy ny Préfet an’i Fenoarivo-Atsinanana nitondrana ny solontenan’ilay orinasa hanamboatra ny kianja. Ny andron’ny zoma io ihany, nanomboka avy hatrany ny asa tamin’ny alalan’ny fanorenana fefy vato.
Fefy izay hovitaina ny volana desambra. Ny volana janoary 2018 kosa no manomboka ny fanamboarana ny sisin’ny kianja, izany hoe fanamboarana ny pista fihazakazahana ho an’ny taranja atletisma. Fanamboarana pista arahin’ny fanamboarana ny « tribune » ho an’ny mpijery baolina. Hisy koa ny fanorenana kianja filalaovana volley-ball sy ny fanamboarana ny bozaka ambony kianja filalaovam-baolina.
Havadika ho kianja anisany manara-penitra indrindra ao anatin’ny Faritra Analanjirofo ny kianja ao Vavatenina. Fotodrafitrasa izay tena ilain’ny vahoaka ao an-toerana tokoa. Na ireo raiamandreny ara-drazana na ireo raiamandreny ara-pivavahana na ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao Vavatenina, dia samy nankasitraka izao asa goavana tanterahina ao amin’ny kianja ao Vavatenina izao. Ho taona vaovao sy ho kianja vaovao ho an’i Vavatenina ny taona 2018.
2017-11-25 12:58:34 par bordeaux 3300
Hahaha.mm à hakatahaka an i rajoelina. UEFA Andy am Faran NY mandat hitokana NY asa manarapenitra.tandremo fa mampandry anareo NY fanjakana eh. Mis y raha ampidirany chinois ao teteky.hitanareo Andy brikaville. Ampatoriana aminy fizarana cahier sy cartable NY zanagasy tsy mis y emoreg mpiaro. Valeur tsy ampy 5milion akory cartable.MBA hainao min anrondian i président vempire tant Australie ? Contrat en milliard vita tag y. Anjaranareo vavatenina teteky tsisy vahoak voatsitsy teto amadagascar rehefa tonga chinois hitrandraka fa riakin NY produit chimique tanim barinareo. Andraso fa hoavy NY tour nareo roi vavatenina a.
Takian’ ny vahoakan’ ny faritra iva andeha hisotro ronono Ravalo HETSIKA TETSY AMPEFILOHA (199) 12 décembre 2018 Vehivavy iray maty notapahin-doha, tsy hita popoka ny vadiny SAMBAVA (177) 11 décembre 2018 Matotra sy nirindra ny fandaharan-dRajoelina, lainga sy hevi-dravina no nasetrin-dRavalomanana ADY HEVITRA HO ENY IAVOLOHA (176) 10 décembre 2018 “Tahaka ny fandroahana mpiasa an-trano ny fanalana mpiasam-panjakana” RAVALOMANANA TEO AMIN’NY FITONDRANA (151) 13 décembre 2018 Tsy misy resaka politika ny fisamborana an’i Haja TONIA MPAMPANOA LALANA (144) 9 décembre 2018 Efa ho 580 Miliara fmg ny hetra tsy voaloan’ny orinasa Tiko FITONDRANA JADON-DRAVALOMANANA (111) 10 décembre 2018